Golaha wasiirada Somaliland oo ansixiyey xeer muhiim ah (Aqri) | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Golaha wasiirada Somaliland oo ansixiyey xeer muhiim ah (Aqri)
Golaha wasiirada Somaliland oo ansixiyey xeer muhiim ah (Aqri)
Golaha wasiirada Somaliland ayaa fadhigoodii maanta oo u dhacay habka maqalka iyo muuqaalka (Video Conference) ku ansixiyey xeer cusub oo dhawaan laga dooday.
Fadhigaasi oo uu shir guddoominayay madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi ayaa lagu meel mariyay xeerka maal-gashiga Somaliland oo ay soo diyaariyeen wasaaradda maaliyada iyo xafiiska garyaqaanka guud.
Xeerkaasi oo hore looga soo dooday ayaa maanta dhaqan galay, kadib markii goluhu uu si aqlabiyad ah u meel mariyay, kadib markii warbixin dheer laga dhageystay wasaarada maaliyada Somaliland.
Waxaana kulankaasi wasaarada arrimaha gudaha looga dhageystay warbixin guud oo ku saabsan xaalada amniga iyo nabad-gelyada, maadama maalmihii u dambeeyay ay taagneyd xiisado abuuray rabshado hor leh.
Sidoo kale Wasiirka maaliyadda ayaa golaha faah-faahin dheer ka siiyey siyaasadda hantida raagta oo wasaaraddu soo diyaarisay, taas oo lagu dabbaqi doono hantida dawladda si loo ogaado, loona qiimeeyo, isla markaana loo diiwaan-geliyo hantida dawladda si midaysan iyadoo hore loogu qaybiyey golaha siyaasaddan.
Ugu dambeyntiina waxa uu wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka uu golaha hor-geeyay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka waddo-marista, isagoo wasiirku sharraxaad ka bixiyey wax-ka-beddelka iyo kaabista lagu sameeyey xeerkaas.